Ciidamada Dowladda oo Rasaas ku furay qaar ka mid ah dadkii u soo baxay Mudaharaadka Muqdisho - WardheerNews
Ciidamada Dowladda oo Rasaas ku furay qaar ka mid ah dadkii u soo baxay Mudaharaadka Muqdisho
Muqdisho (WDN)- Mudaaharaad si nabad gelyo ah ku socday aagga KM 4 ee Garoonka Diyaaradaha, ayna horkacayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Kheyre, ayaa ciidamo ka tirsan DF oo fadhiyay bar baaritaan ay rasaas ku furiyeen. Wali lama oga in dhimasho ama dhaawac soo gaadhay dadkii mudaharaadayay, hase yeeshee mudaharaadka oo si toos looga gudbinayay baraha bulshada, ayaa laga maqlayay dhawaaqa rasaasta iyada oo la arakayay muuqaalka kala yaaca dadkii mudaharaadayay.
Warar saaka horaantii soo baxay, ayaa sheegay in DF ay geysay ciidamo wata qalabka halwgalka dagaalka, goobta –Daljirka Dahsoon oo qorshuhu ahaa in Midowga Musharixiintu kula hadlaan dadka , islamarkaana xidhay dhamaan wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka magaalada Muqdisho. Taasi oo ay ujeedadeedu tahay si loo cabudhiyo isu soo baxa dadka.
Xaaladda magaalada ayaa aad u cakiran, iyada oo ay jirto cabsi ah in amaanku farah ka baxo.